🥇 ▷ Motorola One Action: moobiilka doonaya inuu noqdo kamarad ficil ✅
Motorola One Action: moobiilka doonaya inuu noqdo kamarad ficil
Kaamirooyin aad u tiro badan ayaa muddo dheer caado u ahaa sawir qaadista mobilada. Soosaarayaasha badankood waxay diirada saaraan bixinta zoom dheeraad ah, laakiin waxaa jira kiisas kala duwan sida Motorola One Action oo hadda uun la sameeyay. Halkaan ma lihin zoom sidaasoo kale ah, laakiin muraayad weyn, dareeme qoto dheer iyo a kamarad ficil
Marka lagu daro qaabeynta kamaraddan qaaska ah, Moto One Action wuxuu leeyahay astaan ​​farsamo oo karti leh oo qayb ka ah kala-badhtamaha. Waxaa ka mid ah astaamaha ugu fiican ee ay ka mid yihiin Samsung ayaa saxeexay processor-ka, 128 GB awoodiisa ama barnaamijkiisa Android One kaas oo hubiya cusboonaysiinta muddo laba sano ah. Aynu aragno wax kasta oo Moto One Action ay bixiso
Xaashida macluumaadka Motorola One Action
6.3 inji IPS LTPS FullHD + 2,520 x 1,080, 432 dpi
128 GB + MicroSD ilaa 512 GB
5 MP qoto dheer dareeme
Kaamirada ficil, xagal ballaadhan, farsamada Quad Pixel, f / 2.2
3,500 mAh Degdeg ah 10W
FARSAMADA IYO CODKA
Akhriso qoraalka faraha
Kamarad Saddexagal ah oo ku saabsan adeegga ficilka
Aan ku bilowno muujinta ugu wanaagsan ee Moto One Action: kaamirooyinkeeda. Sidii aan horayba ugu soo marnay, waxay leedahay a Nidaamka kamarad saddex-gees ah. Midka ugu weyn wuxuu leeyahay 12 megapixel sensor, lens leh daboolka f / 1.8 wuxuuna diirada saaraa baaritaanka wejiga. Waxaa weheliya 5 megapixel sensor mas’uul ka ah cabirka qoto dheer ee goobta (ma aha ToF) si loo bixiyo natiijooyin ka sii fiican qaab sawir.
Layliga saddexaad waa halka ay cusaybtu tahay. Motorola ma shaaca ka qaaddo xalka dareeraha, laakiin waxay leedahay lens aperture lens f / 2.2 iyo tikniyoolajiyada Quad Pixel taas, sida laga soo xigtay Motorola, ku dhufo afar dareen xasaasi ah. Intaa waxaa sii dheer, tikniyoolajiyadani waxay khusaysaa labadaba fiidiyow iyo sawirro.
Kaamirada ficilku waxay leedahay lens-xagal ballaadhan, xasiliyeyn waxayna noo oggolaaneysaa inaan duubno fiidiyowyada tooska ah si kor loogu qaado taageerada wanaagsan.
Marka lagu daro muraayaddan xagal-ballaadhan, kamarad-hawleedku waxay leedahay xasillooni waxayna kuu oggolaaneysaa inaad duubto fiidiyowyada tooska ah adigoo gacanta ku haya moobilka. Waxay kaloo leedahay hawlo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaq tartiib ah iyo hyperlapse. Kahor intaadan xirmin qaybtaan, faallo ka bixi Kaameerada hore waxay leedahay 12 megapixels oo qaraar waxaana lagu dhexjiraa shaashadda god geeska bidix
Astaamaha dhexda oo leh barnaamij saafi ah
Sidaan horayba u sheegnay, Motorola One Action wuxuu leeyahay warqad farsamo u gaar ah oo ah heerka dhexe, inkasta oo ay ku taagantahay tiptoe qaybaha qaar si ay isugu dayaan inay istaagaan. Waxay leedahay Samsung Exynos 9609 processor, oo ay la socdaan 4 GB oo RAM ah waxaana laga heli doonaa hal nooc oo leh 128 GB oo ah balaca ballaca oo ay la yeelanayso MicroSD. Bateriga waa 3,500 mAh wuxuuna leeyahay awood xoog leh oo 10W ah.
Motorola waxay ku tiirsan tahay Samsung nooca silikon ee mashiinka casriga ah: Exynos 9609 oo ay la socdaan 4 GB oo RAM ah.
Marka loo eego shaashadda, Motorola wuxuu tilmaamayaa moodada godka si uu u dhexgalo kamaradda hore sidaasna ay awood ugu yeelato inay xoqdo waxoogaa yar oo milimitir ah xagga hore. Sida laga soo xigtay astaanta, isticmaalka hore waa 84% waa sax laakiin ma ahan mid cajiib ah; Ha la yaabin inaad ku aragto jabka hoose ee ballaaran. Jid ahaan, ma jiro qol loogu talagalay akhristaha faraha, laakiin waxaa la dhigay dhabarka.
In softiweerka, Motorola wuxuu wali kujiraa runtii dhaqankiisa ah inuu kudaadiyo Android sida ugu sareysa uguna macquulsan, dhab ahaanna, moodalkan ay si toos ah ugu khamaaraan Android Mid ka mid ah nooca ‘9 9 Pie’ ah. Barnaamijka Android One wuxuu bixiyaa laba sano oo casriyeyn nidaam ah iyo seddex sano oo xirmo amni ah.
Aayadaha iyo qiimaha Motorola One Action
Sidii aan sheegnay, Motorola One Action wuxuu suuqa ku gaaraa hal nooc oo 128 GB ah. Waxa aan dooran karno waa midabka, oo noqon doona buluug ama caddaan. Taariikhda suuq geynta lama xaqiijinin laakiin Motorola wuxuu ka hadlayaa dhamaadka bisha Ogosto. Qiimaha waa 279 euro, aad u tartan badan tixgelinta faa’iidooyinkeeda.
La wadaag Motorola One Action: moobiilka doonaya inuu noqdo kamarad ficil